Homeसमाचारझापामा केटाले केटालाई नै बिबाह गरेपछि गाउँलेहरु भन्छन्: ‘यिनीहरुले कसरी नानी जन्माउलान् ?(भिडियो सहित)
December 16, 2020 admin समाचार 8004
झापामा झण्डै एक हप्ता प’हिले केटाले केटासंगै बिहे गरेको समाचार बा’हीरिएको थियो । तामांग केटाले क्षेत्री के’टासंग बिहे गरे भन्ने समाचार सोशल मिडि’यामा निकै चर्चाको समा’चार बन्यो । कतिले त्यस्लाई सहजै स्वी’कार गरे भने कतिले स्वीकार गर्न मानेन् । समाज, साथीभाई र सोशल मिडिया युजरस् मध्य केहीले उनी’हरुको बिहेलाई स्वीकार गर्न नमा’नेतापनि उनीहरुले एकअर्कासंग बिहे गरेरै छाडे ।
उनीहरुको बिहेको सबै’भन्दा राम्रो कुरा त के रह्यो भने उनीहरुलाई उनीहरुको परि’वारको पुर्ण रुपमा समर्थन रहेको छ । दुवै केटाहरुको परिवारको तर्फबाट आमाहरुले उनीहरुले एकअर्का’संग गरेको विबाहको बारेमा आफुहरुलाई कुनै पनि आ’पत्ति नभएको बताएका छन् । घरमा केटालाई नै बिहे गरेर बु’हारी ल्याउने बेहुलालाई उनकी आमाले छोराको खुशी नै आफ्नो खुशी भनेकी छन् भने उता घरमा ज्वाई आउनु पर्नेमा केटालाई नै ज्वाईको रुपमा स्वी’कार्नु पर्दा सासुले पनि आफुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएकी छन् ।
उनीहरुको बिहेमा परि’वारले कुनै पनि अप्ठ्यारो म’हसुस नगरेतापनि छिमेकीको भने निकै नै चासोको विषय बनेको छ । छिमेकीहरुले यी दुईले अब कसरी स’न्तान जन्माउलान् त ? भनेर अचम्मित बेनको कुरा मिडियासंगको कुरा’कानीमा बताएका छन् । फेसबुक र युट्यूवमा केटाकेटाको बिहेको समा’चार हेर्दार्हे आफ्नै घर छेउमा केटाले कटालाई नै बुहारी बनाएर ल्याएपछि छि’मेकीहरु दंग परेको बताउँछन् । भिडियो हेरौ: इताजा खबरबाट
March 2, 2021 admin समाचार 5988
भाई वैदेशिक रोज’गारीमा रहेको बेलामा जेठाजुले बुहारीसंग फेसवुक म्यासेजमा यौ ‘न प्रस्ताव राखेको कुरा सार्व’जनिक भएपछि अहिले ब ‘वाल भएको छ । जेठाजु पनि वैदेशिक रोजगारीमा भएको बेलामा २० हजार रुपैया सापटी माग्दा यस्तो प्रस्ताव
October 3, 2020 admin समाचार 12163
October 15, 2020 admin समाचार 11574